Amashishini amaNqaku kwiQonga leNtengiso yezeNtlalontle | Martech Zone
Ukuba ungumbutho omkhulu, kukho izinto ezintandathu ezibalulekileyo kwisoftware yeshishini oyifunayo rhoqo:
Iingxelo zeAkhawunti -Olona phawu lucelwe kakhulu kuyo nayiphi na iqonga lweshishini kukukwazi ukwakha ii-hierarchies zeakhawunti kwisisombululo. Ke, inkampani engumzali inokupapasha egameni lophawu okanye ilungelo lokuthengisa ngaphantsi kwabo, ukufikelela kwidatha yabo, ukunceda ekuthumeleni nasekulawuleni iiakhawunti ezininzi, nasekulawuleni ukufikelela.
Iinkqubo zokuvunywa -Imibutho yeshishini ihlala inemigangatho yokuvunywa ukujongana nomthetho, ulawulo kunye nolandelelwano lwangaphakathi lwentsebenziswano. Uhlaziyo lweendaba zosasazo lwentlalo, umzekelo, lunokuhamba ludibane nomzobi wegraphic, luye kumphathi, kwezomthetho, libuyele kumhleli, ludlulele kumshicileli. Ukwenza oku kukhutshwa ngesandla nge-imeyile okanye kwiispredishithi kunokuphuma kulawulo
Ukuthotyelwa, uKhuseleko, iiLog, kunye nee-Backups -Kwiinkampani ezilawulwa kakhulu okanye zikawonke-wonke, ukhuseleko lubaluleke kakhulu ukuze amaqonga afuneke ukuba enze iinkqubo zophicotho-zincwadi zomntu wesithathu, kwaye abe nokugcinwa kwangaphakathi kunye nokulondolozwa komsebenzi ngaphakathi kwinkqubo.
Ukungena kwelinye (SSO) -Iinkampani zifuna ulawulo lwangaphakathi lwezicelo ezingena ngokungena kwiqonga zilawulwa ngokweSebe le-IT okanye kwiqonga labo leofisi.
Ukulawulwa kokuLawulwa -Iindima kunye neemvume zibalulekile kwisoftware yeshishini ukuqinisekisa ukuba umntu akanakudlula kwiinkqubo ezivunyiweyo okanye enze izinto angagunyaziswanga kuzo.
Izivumelwano zenqanaba leenkonzo (SLA) -Kuseto lwehlabathi, ixesha lokuphumla libaluleke kakhulu ekuvunyelwene ngalo kwi-SLA kufuneka ukuba basayine ikhontrakthi nalo naliphi na iqonga leshishini. Kananjalo, ulondolozo kunye nexesha lokuphumla zichaziwe esidlangalaleni ukuqinisekisa ukuba aziphazamisi ukusebenza.
Inkxaso yeelwimi ezininzi -Siphila kuqoqosho lwehlabathi, ke amandla okuxhasa iilwimi ezininzi ngaphakathi kweqonga lomsebenzisi kunye nokupapasha ngeelwimi ezininzi kubalulekile. Ngelishwa, iilwimi ukusuka ekunene ukuya ekhohlo zihlala zilandelwa emva kokuba amaqonga esikali kwaye emva koko kunzima ukubuyela umva kwaye uphinde wenze injineli isisombululo.
Ixesha lexesha elininzi -Ungamangaliswa yindlela iinkampani ezincinci ezingayithathi ngayo ixesha xa zipapasha unxibelelwano. Ngaphandle kokumisela ixesha lomsebenzisi ngamnye ngaphakathi kwiqonga, ngaba ungalucwangcisa unxibelelwano lwakho ekujoliswe kulo kwindawo yexesha ekujoliswe kulo? Iinkampani ezininzi zinendawo yeakhawunti ebanzi yexesha kunokuba zibandakanye ixesha lendawo.
Unxibelelaniso - Ujongano lweNkqubo yokuSebenza (APIs) kunye nokudityaniswa kwemveliso kwezinye iinkqubo kubaluleke kakhulu ekusebenziseni ngokuzenzekelayo, ukufikelela kwedatha, kunye nokunika ingxelo ngexesha langempela.
inshorensi -Siphila kwihlabathi elinobuzaza, ke imfuno yokuba iqonga line-inshurensi eninzi yokugubungela nawaphi na amatyala ayimfuneko ngaphakathi kumaqonga esoftware. Mhlawumbi iqonga laqhekezwa kwaye kwavela amatyala avela kubathengi bokugqibela… umboneleli wakho unokuba noxanduva lokuhlawula iindleko.
Ukungena kumaqonga amajelo eendaba
Ngasinye kwezi zingentla kufuneka zibandakanywe kwiqonga lakho leendaba ukuba uyinkampani yeshishini. Amaqonga eendaba ezentlalo ahlala enezi zinto zilandelayo:
Ulawulo lweNkqubo -Ukwazi ukwenza ukulandelelana kwiqela elinye labasebenzisi ngaphakathi kwenkqubo ukuya kwelinye kubalulekile. Umsebenzisi ngamnye unendima yakhe kunye neemvume ezithintela amandla abo. Imizekelo:
Uhlobo lwakho lukhankanyiwe kwi-intanethi (kunye okanye ngaphandle kokumakwa). Ngaba isicelo singahanjiswa kwintengiso ukuba yinto enokubuzwa? Ukuxhasa abathengi ukuba ngumba wabathengi? Ukuthengisa ukuba sisicelo seendaba?
Uneshedyuli yomkhankaso obandakanya ukupapashwa kwezentlalo kunye nexesha elibekiweyo. Ngaba iqonga lakho leendaba ezentlalo libangela kunye nomsebenzi wokuhamba ohamba kwiqela lakho lomxholo, kwimizobo yakho okanye kwiqela levidiyo, kwiqela lakho elisemthethweni okanye elilawulayo, ngokuvunywa nokucwangciswa?
Ukucwangcisa kunye neekhalenda Kwinqanaba lokudibana kunye neakhawunti, ngaba unokucoca ngokulula kwaye ugcine ikhalenda yakho yemidiya yoluntu kwaye unike imisebenzi?
Ukuphulaphulwa kweNtlalontle kunye noHlahlelo lweeMvakalelo Kwinqanaba lokudibana kunye neakhawunti, ngaba ungahambisa amaphulo okuphulaphula eluntwini, iimveliso, kunye nomzi mveliso kunye nohlalutyo lweemvakalelo? Ngaba ungazenza kwangoko izicelo zendlela ngaphakathi zokwazisa iqela elifanelekileyo ukuba liphendule? Ngaba unokwenza ingxelo ngemvakalelo ngokuhamba kwexesha ukuqinisekisa ukuba ugcina ubudlelwane obuhle kunye nabathengi bakho?
Unxibelelaniso -Ngaba ungasebenza kwiqonga eliphakathi ukunxibelelana, uthumele umyalezo, kwaye upapashe kwisitishi ngasinye seendaba zentlalo kunye neakhawunti oyilawulayo kwinqanaba lokudibana okanye leakhawunti? Ngaba ungatsala idatha ubuyisele kwinkxaso yabathengi bakho okanye kwinkqubo yobudlelwane nomthengi ukuba kukho izicelo? Ngaba ungatyhala imibuzo yokuthengisa kwinkqubo yokunceda ekuchongeni amathemba kunye nokudibanisa amachaphaza phakathi kwephulo kunye nokondla kwezentengiso?
Ukudityaniswa kohambo -Ungakwazi ukwenza ukuba i-omnichannel yohambo lwabathengi ibangele kunye neziganeko zomsebenzi wonxibelelwano kwimithombo yeendaba njengezinto ezinegalelo?
U kufunda Ukusetyenziswa kwe-AI ukufumana ulwazi olunzulu kwi-brand iyonke, iincoko ezikwi-Intanethi, ukuzibandakanya kwimiyalezo ethile (amagama aphambili, imifanekiso), kunye nethuba lokufunyanwa, i-upsell, okanye ukugcinwa.
Ukunika ingxelo kunye neeDashbhodi -Kuwo wonke umsebenzi, ungazenza iingxelo ezomeleleyo kwinqanaba lokudibana nelingaphantsi elinokuhluzwa ngokulula, ukwahlulwa, emva koko uthelekise nomsebenzi kuwo onke amaphulo, amaxesha onyaka, okanye amaxesha athile?
Ezi mpawu zongezwa kwiimpawu zakho zosasazo lwentlalo ezenza ukuba ukuzenzekelayo, ukusebenza kakuhle, ukucwangciswa, kunye neekhalenda kwimizamo yakho yemidiya yoluntu.
Ivenkile yeNtengiso yeNtlalontle
I-Salesforce Social Studio ibonelela ngazo zonke izinto ezifunekayo kuLawulo lweMidiya yoLuntu, kubandakanya:
Ulawulo-ukulawula abasebenzisi kunye nokufikelela kwiimveliso ze-Salesforce.
Papasha-isakhono sokucwangcisa kunye nokupapasha kwii-akhawunti ezininzi kunye namajelo.
Ukuzibandakanya-ukukwazi ukumodareyitha kwaye ujoyine iincoko, emva koko uqhubekeke nokuhamba komsebenzi uye kwintengiso.
Hlalutya-jonga kwaye umamele ii-akhawunti ezizezakho kwaye ufumane ukuqonda kumajelo asekuhlaleni kumagama aphambili nakwimvakalelo.
Ubukrelekrele bobugcisa-I-Salesforce u-Einstein unokusetyenziselwa ukwahlula ngokuzenzekelayo imifanekiso ngeempawu ukufumana ulwazi olunzulu ngokuzibandakanya.
Yeyiphi eyona Platform yamaShishini amaNtlalontle?
Ayisiwo onke amaqonga eendaba ezentlalo enziwe ngayo yonke into oyibonayo edweliswe apha ngasentla. Ndihlala ndikhuthaza abathengi bam ukuba bahambe ngokulandelelana kwamanyathelo xa utyalo-mali kwitekhnoloji yentengiso oko kuhlala kungabandakanyi ukuthandwa kweqonga, amabhaso alo, okanye ukwamkelwa kwayo ziifemu zomntu wesithathu.
Qala ngeeNjongo zakho -Uzama ntoni ukufezekisa ngeqonga leendaba zentlalo? Qonda i inkinga, ifuthe layo kumbutho wakho, kunye nexabiso elinokubonelelwa sisisombululo esikhulu. Oko kunokubandakanya ukonga kwi-automation yangaphakathi, ukuthatha izigqibo ezingcono kunye nedatha yexesha-lokwenyani, okanye ukwanda kokugcina kubulela kumava abathengi angcono.
Chonga izixhobo zakho -Ziyintoni izibonelelo zangaphakathi (abantu, uhlahlo-lwabiwo mali, kunye nomda wexesha) ekufuneka uye eqongeni elitsha. Ngaba unenkcubeko yokwamkelwa? Ngaba unayo iqela elinokuthi liphantsi koxinzelelo lokufunda kwaye lifudukele kwinkqubo entsha?
Chonga iinkqubo ezikhoyo -Phicotha amaqela akho angaphakathi ukusuka kubaphathi ukuya kubasebenzi abajolise kubathengi kwiinkqubo zosasazo lwentlalo okhoyo ngoku. Qonda apho kunxunguphele khona kunye nokuxabisa amaqonga kunye neenkqubo ezikhoyo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ukhetha isisombululo esiza kuphucula iinzame zombutho kunokuba sizenzakalise. Oku kunokwenziwa kuluhlu lokutshekisha olwahlukileyo kuvavanyo lweqonga lakho elilandelayo leendaba zentlalo.
Vavanya abathengisi bakho -Thelekisa oovimba bakho kunye neenkqubo kumthengisi ngamnye kwaye uqinisekise ukuba ziyahlangabezana nazo zonke izakhono ezikhoyo ozifunayo. Kunokubakho ezinye iinkqubo ezifuna ukusebenza ngexesha lokumiliselwa okanye lokufuduka… kodwa zama ukuqonda indlela oza kuyenza ngayo inkqubo nganye ngokweenkcukacha ukunciphisa umngcipheko wokwamkelwa komntwana.
Linganisa eli thuba -Ukuba utyala imali kwiqonga elahlukileyo, baya kuba neempawu ezintsha ezibonelela ngethuba lokuphucula imbuyekezo yakho kutyalo-mali lwetekhnoloji.
Ukuhambisa ishishini kwimizamo yeendaba zosasazo kwiqonga elitsha kunokuba lutyalo mali olunomvuzo kwinkampani yakho yokuthengisa kunye nemizamo yokuthengisa. Khetha ngobulumko… kwaye ungathandabuzi ukusebenza ne umcebisi okanye umhlalutyi olaziyo eli shishini kwaye unokukunceda uvavanye kwaye ukhethe umthengisi wakho olandelayo.
tags: ishishini kwimidiya yoluntuamashishini amajelo eendaba ezentlaloamashishini amaqonga eendaba ezentlalocrm yoluntuImidiya yokuncokolauhlalutyo kwimidiya yoluntuugcino lweendaba kwimidiyaukuthotyelwa kwemidiya yoluntuimithombo yeendaba zentlaloulawulo lolwalamano lwabathengi kwimidiya yoluntuimithombo yeendaba zentengiso yeqonga lokuthengisaukumodareyitha kwimidiya yoluntuukubeka iliso kwimidiya yoluntuukupapashwa kwimidiya yoluntuummiselo wemidiya yoluntuUkucwangciswa kweendaba ezentlaloindibaniselwano yemidiya yoluntuukuhamba kweendaba kwimidiya yoluntu
Yintoni iCRM? Zithini izibonelelo zokusebenzisa enye?
Iindlela zokuYila i-imeyile ka-2021
Meyi 20, 2013 kwi-10: 59 AM
Hee Doug, uphononongo olukhulu! I-Shoutlet liqonga elinamandla amakhulu, liqinisekile! Ndiyathemba uphilile.